Maalinta: Diseembar 30, 2019
Wadada Tareenka ee East Express Ankara Kars iyo Khariidadda
Wadada Tareenka ee East Express Ankara Kars iyo Khariidadda: Gaar ahaan caan ku ah dhalinyarada, East Express waxay ka baxdaa Ankara waxayna gaartaa Kars min Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan iyo Erzurum. Saldhigyada dhexe 5- [More ...]
Dayactirka Mashiinnada Khadadka Wadada Xawaaraha Sare iyadoo ay sabab u tahay hindisada Xarumaha Wadooyinka ee Gobolka Highway (TCDD) 2019/613571 GIK tiradaasi waa qiyaastii. [More ...]
Kumaa ku biiriyay qaabeynta baabuurka guriga?
Murat Günak wuxuu ku dhashay magaalada Istanbul sanadki 1957. Waa ninkii hore naqshadeeyaha Volkswagen iyo Mercedes-Benz. Kadib markii uu ka qalin-jabiyay dugsiga sare ee magaalada Istanbul, Günak wuxuu bartay naqshadda wershadaha ee Hochschule für Bildende Künste (Akadeemiyada Farshaxanka Farshaxanka) dibadda ee Kassel. [More ...]
Gaadiidka Dawlada Hoose ee Magaalada Eskişehir Diyaarinta Sannadka Cusub
Degmada Eskişehir Magaalo-weynaha waxay sii wadaysaa inay garab istaagto muwaadiniinta iyadoo leh tareeno dheeri ah iyo adeegyo dheeraad ah oo bas ah si aaney dhibaato uga dhicin gaadiid sanadka cusub. Habeenkii Talaadada, Disembar 31, 2019 [More ...]
Gegada Diyaaradaha ee Magaalada Istanbul ayaa Noqday Madaaradii 5-aad oo Noqday Diidmada Ugu Badan ee Maanta Maanta
Roobka roobka iyo dabaylaha culus ee ka dhacay Istanbul ayaa sidoo kale saameyn xun ku yeeshay isku socodka hawada. Diyaarado aan soo degi karin garoonka Diyaaradaha Istanbul waxay booqdeen Gobolka Marmara. Intii la dhisayay Gegada Diyaaradaha Istanbul, khubaradan [More ...]
TÜVASAŞ 20 Sawirro iyo Natiijooyin
20 shaqaale ah oo codsanaya TÜVASAŞ'a 2 kun 598 qof ayaa galaya wareysiga 103 waxaa lagu go'aamiyay saami badan. In kasta oo musharraxiinta shaqaalaha ee isugu soo ururay xarunta bulshada ay farxad weyn ka muujiyeen xafladda, ayaa haddana nidaamka ' [More ...]
Ankara Metros Waqti intee le'eg ayay shaqeyn doontaa Sannadka Cusub?
Kooxaha Dawladda Hoose waa inay joogi doonaan garoonka iyo miiska miisaska meelo badan oo magaalada ah si dadka deggan caasimadda ay u galaan Sannadka Cusub nabad iyo xasillooni sannadka cusub. Sidoo kale, ANKARAY, Metro iyo Khadadka Cable Car [More ...]
Xadhig ku xardhan tareenka wacyigalinta
Isuduwidda GaadiidkaPark A.Ş., mid ka mid ah xiriirada degmada Kocaeli Magaalo Weyn, xubno ka tirsan Aydınlatın Yarını Yarım Youth Platform, kı prolmek İlmek Sevgi Öroruz proj, cillad ku dhaceysa taraamka ardayda wax ku barata dugsiyada iskuulada oo dhaqaale xumo liidata. [More ...]
Agaasinka Isgaarsiinta ayaa shaqaaleysiin doonta 30 khabiiro ku taqasusay isgaarsiinta oo hoos imaaneysa cinwaanka Kaaliyaha Khaaska ah Isgaarsiinta. MACLUUMAAD GUUD (1) Tirada ugu badan ee shaqaalaha loo magacaabi karo Kalkaaliyaha Isgaarsiinta Kaaliyaha waa 30 (soddon). Ku guuleystayaasha Imtixaanka Galitaanka [More ...]
Xarunta Denizli Ski Center ayaa u soo duushay si ay u noqoto xarunta soo jiidashada dalxiiska jiilaalka Denizli Ski Center, iyada oo furitaanka xilliyada iyo kuwa doonaya in ay ku raaxaystaan ​​barafka iyo barafka barafka la booday. Cufan leh tayo baraf leh [More ...]
Adeegga gawaarida fiilada ee udhaxeysa bartamaha magaalada Bursa iyo Uludağ lama qaban karo sababtoo ah dabeylaha xoogan ee saameeya Bursa. xarumaha dalxiiska muhiim jiilaalka ugu Turkey ee waqtigii wiishashka ski ah ee fidisa helitaanka Uludag [More ...]
Injiil loogu talagalay Istanbulites sanadka cusub! ; Gawaarida dadweynaha ee ay leedahay IMM waxay ku heli doonaan adeegyo bilaash ah dhammaan ciidaha diinta iyo sanadka rasmiga ah ee sanadka 2020, maalmaha imtixaanka iyo furitaanka iskuulka. Sannadka Cusub [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Bursa waxay qaaday taxaddar kasta si loo hubiyo in muwaadiniintu ay ku qaadan karaan amaan iyo nabadgelyo joogitaan fiidnimo Talaadada, Diseembar 2019 iyo Arbacada, Janaayo 2020, oo ku xira 31 illaa 1. Xuduudaha Dowlada Hoose ee Bursa [More ...]